GAME OF THRONES ၏အကြိုမြင်ကွင်း - ရာသီ ၈ အပိုင်း (၂) ၏ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်အထွတ်အထိပ်ကိုကြည့်ပါ - သတင်း
ဤတွင်လာမည့်သီတင်းပတ်၏ရာဇပလ္လင်ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ preview ကို !!!
Game of Thrones ၏ဇာတ်လမ်းသစ်ကိုလူတိုင်းစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေသဖြင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးသည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်းခေတ္တနားနေကြသည်။ ရာသီရှစ်ခုရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးညထုတ်လွှင့်တဲ့လူပေါင်းတစ်ဘီလီယံကိုကြည့်ရှုခဲ့တယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ Game of Thrones နှင့်ချိတ်ဆက်နေသည်ကိုသက်သေမပြနိုင်ပါကကျွန်ုပ်ဘာလဲဆိုတာကျွန်ုပ်မသိပါ။ အကယ်၍ များစွာသောသူတို့ကဲ့သို့သင်၏နောက်တစ်ဆင့်အတွက်တစ်ပတ်လုံးလုံးစောင့်ဆိုင်းရန်သင်မစွမ်းနိုင်ပါကယခုတစ်ပတ်အတွင်းသင့်အားကူညီရန် Game of Thrones ၏အကြိုမြင်ကွင်းမှာဤတွင်ရှိသည်။
ဤကြိုတင်ကြည့်ရှုမှုသည်ရှိကြောင်းပြသသည် ဒီတော့ အများကြီးပိုလာသည်၊ ပထမဇာတ်လမ်းတွဲတွင်သွေးထွက်သံယိုမှုမရှိသော်လည်း၎င်းသည်အစမျှသာဖြစ်သည်။ The 50- စက္ကန့်ရှည်လျားသောကလစ် Dailys (Emilie Clarke မှကစားသော) နှင့် Jaime (Nikolaj Coster-Waldau မှကစားသည်) နှင့်စကားစသည်။
Game of Thrones မှ Daenerys သည်နောက်တွဲယာဉ်ကိုအစမ်းကြည့်သည်
သူမက 'ကျွန်မကလေးဘဝတုန်းကအဖေကိုသတ်ခဲ့တဲ့လူအကြောင်း၊ အဲဒီလူကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ့်အရာအကြောင်းအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာကျွန်တော့်အစ်ကိုကပြောပြလိမ့်မယ်' လို့သူပြောတယ်။
'Cersei ကိုမင်းဘယ်တော့မှယုံမှာမဟုတ်ဘူး' လို့ Sophie Turner ကဆိုထားသည်။ Sansa က 'မင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူး' ဟုဖြေသည်။
ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာပဲ။ ငါတို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ Jon Snow သည် Night King ၏ခြိမ်းခြောက်မှုအကြောင်းကို ပြော၍ Ser Davos ကိုမေးသည်။ 'မနက်ဖြန်နေမဝင်ခင်' သူကပြန်ဖြေတယ်။
ရာသီရှစ်ပွဲအတွက်ဇာတ်ကား ၂ ကိုနောက်ခံထားသည့် Game of Thrones ၏ preview ဂိမ်းကိုကြည့်ပါ။
Game of Thrones ရာသီရှစ်ခု၊ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၂ ခုနှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲမည်မျှရှိသနည်း။
ဤရာသီ၏ Game of Thrones ၏ဒုတိယအရောင်းအဝယ်သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနံနက် ၉ နာရီတွင်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်အမေရိကန်၌ HBO တွင်ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် Hard Atlant ပရိသတ်များအတွက် Sky Atlantic တွင် ၂ နာရီမွန်းတည့်ချိန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အင်္ဂလန်တွင်တနင်္လာနေ့ညတွင်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ Now TV ကို UK တွင်လည်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ရာသီသစ်မတိုင်မီ Game of Thrones ကိုလိုက်မီရန်သင့်တွင်အခွင့်အရေးမရှိပါ သင်ရှစ်ရာသီအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရန်ပြန်လည်စောင့်ကြည့်သင့်သည့်ဖြစ်စဉ် ၂၁ ခုကိုဝေမျှသည့် GoT စာရေးသူ။
ရာသီသစ်တွင်ဖြစ်စဉ်ခြောက်ခုရှိလိမ့်မည် အပြည့်အဝအရှည်, နောက်ကွယ်မှမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် !!!
• ဤမှတ်ဉာဏ် ၂၁ ခုသည် Game Of Thrones နှင့် ပတ်သက်၍ လူတိုင်းမည်သို့ခံစားနေရသည်ကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသည်
• ဘယ် Game of Thrones ဇာတ်ကောင်ကိုမင်းအကြိုက်ဆုံးလဲ။
• Game of Thrones မှအသံသွင်းတိပ်ခွေများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည် GOLDEN ဖြစ်သည်